Chalet Cordillera de los Andes, Carhuaz, Peru - I-Airbnb
Chalet Cordillera de los Andes, Carhuaz, Peru
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguPatricia
I-chalet yaseSwiss eqhelekileyo enabo bonke ubutofotofo bokubonelela ngokuhlala okumnandi.
Iyaxatyiswa ngobubanzi bayo, ukukhanya, indawo yomlilo, ikhitshi elinezixhobo, amagumbi atofotofo kunye nokuzola kokusingqongileyo.
Ilungele abakhenkethi, iintsapho ezinabantwana, izibini, amagcisa kunye nabantu abafuna ukuzola kunye nokuzola kwendalo ... ilungele ukuphumla, ukucamngca okanye ukumisa phakathi kohambo okanye omnye umzamo womzimba.
Indlela yokufikelela ngaphandle ayikhuthazwa kubantu abanokuhamba okucuthiweyo.
I-chalet sisakhiwo esitsha se-170m2, esakhiwe ngokupheleleyo ngamaplanga aqinileyo ngamagcisa asekhaya kunye nokugqitywa komgangatho ophezulu. Uyilo lwayo lubandakanya iindawo ezinkulu kunye neefestile ezinkulu ezikuvumela ukuba uxabise ubume bendawo engqongileyo.
Uninzi lwesakhiwo sikwinqanaba elinye. Kumgangatho ophantsi, ukongeza kwindawo yentlalontle, ikhitshi kunye nendawo yenkonzo, kukho amagumbi amabini anegumbi lokuhlambela labucala. Kwi-mezzanine, phantsi kwesilingi ethambekileyo, kukho igumbi elibanzi-akukho gumbi lokuhlambela labucala.
Phakathi kwegumbi lokuhlala kunye negumbi lokutyela, indawo enkulu yomlilo yepanoramic ikuvumela ukuba uxabise umlilo kuwo onke ama-angles ayo. Le ndawo yentlalo-apho sinegumbi lokuhlambela- iqikelelwa ngaphandle, ngethafa.
Ikhitshi, elibandakanya ikhawuntara yebha kunye neendawo ezahlukeneyo zokusebenza, inoyilo lwangoku kunye nolusebenzayo, kunye nefenitshala yomthi oqinileyo kunye neetafile zamatye egranite. Ixhotyiswe ngokupheleleyo ngezixhobo ezitsha nezintsha, kunye nempahla yasekhitshini kunye nenkonzo efumanekayo kuzo zonke iindwendwe.
Ngaphakathi, kwindawo yenkonzo, kukho indawo yokucoca kunye nediphozithi (esigcina ivaliwe). Ngaphandle, kukho igumbi lokuhlamba impahla elinomgca weempahla wokomisa iimpahla elangeni.
Igumbi eliphambili linebhedi yendlovukazi ekhululekile kakhulu (1.60 x 2.10 mts.) Kwaye inegumbi lokuhlambela labucala elikhulu (ibhafu ihombisa kuphela). Amanye amagumbi amabini ngalinye linebhedi ephindwe kabini (1.50 x 1.90 yeemitha), elinye linegumbi lokuhlambela labucala. Kwi-mezzanine, sineebhedi ezimbini ezingatshatanga (0.90 x 1.90 mts.) Oko, ngokweemfuno zakho, kunokuphinda kufakwe kumagumbi. Ukongezelela, kwigumbi lokuhlala, sine-sofa ye-futon ephindwe kabini (1.50 x 1.90).
Siphakathi kwibala, sijikelezwe yimisele, umhlaba weefama kunye nodederhu lweentaba zeAndes. Kulo mmandla, iindlela zokungena zihamba ngeendlela ezimxinwa zasemaphandleni ezichatshazelwa ngokusisigxina yimvula; Oku kwenza kube nzima kubantu abanokuhamba okucuthiweyo ukuba bafike bevela phesheya.
Ukusuka kwipropathi, unokwenza uhambo oluthile, uqhagamshelane nabantu basekhaya kwaye ufikelele kwi-Carhuaz fair. Ummelwane wethu okanye abantwana bakhe ungathatha wazi ukuba izityalo zamachiza kule ndawo, ahambe iindwendwe ezincinane ukudlala amanzi acequia, kwakunye ukubonisa indlela yobomi babantu emaphandleni, kunye nemfuyo yabo izityalo zabo . Ngokufanayo, apha unokuthenga iziqhamo, imifuno, amaqanda okanye izilwanyana (iinkukhu, onogwaja) eziveliswa ngabamelwane abafanayo, kwaye ngaloo ndlela banomvuzo wabo omncinci.
Kufuphi nathi kukho amashishini amancinci kakhulu, kodwa eCarhuaz uya kufumana yonke into: ukongeza kwi-fair, kukho ivenkile enkulu, iindawo zokugcina iimpahla, iibhakary, iikhemesti, iiresityu, icawa, iibhanki kunye neendawo ezigqwesileyo ze-ice cream.
Kulo mmandla welizwe, iCordillera de los Andes yahlulwe yaba ziintaba ezimbini: iCordillera Negra kunye neCordillera Blanca, eyokugqibela inencopho eziphakamileyo ezigqunywe likhephu phakathi kwayo yiHuascarán (eyona ntaba iphakamileyo ePeru). Ukunyibilika kwala machibi omkhenkce, kondla amachibi ahlukeneyo ngamanzi aluhlaza kwaye ekugqibeleni aqukuqelele kuMlambo iSanta, otyhutyha yonke le ndlela.
Le ndawo, ekwabizwa ngokuba yi "Peruvian Switzerland", inomtsalane omkhulu wabakhenkethi, ngakumbi kubathandi bendalo, imisebenzi yeentaba kunye nemidlalo ye-adventure. Uluhlu olubanzi lwezinto ezinomtsalane lusuka kwimillenary relics yempucuko yangaphambili, iintaba ezinkulu ezigqunywe likhephu, iintyatyambo kunye nefauna eqhelekileyo kule microclimate, imithombo eshushu kunye needolophu zaseAndean ezichwayitileyo, ezinabantu abanesisa, abanomdla wokubonisa intsomi yabo eyahlukeneyo.
Iimarike ezimibalabala okanye imiboniso inomtsalane; Lithuba lokufumana iintyatyambo, iziqhamo kunye nokutya kwaloo ndawo, kodwa nokuba nonxibelelwano oluthe ngqo nabemi kunye nokufunda ngamasiko abo. Kumboniso weCarhuaz, rhoqo ngooLwesithathu nangeCawa yeveki nganye, kwiidolophu ezingqongileyo, umsebenzi uqala ngonyezi, xa izithuthi zisihla zisiya esixekweni zithwele iimveliso ezivela kwiindawo eziphakamileyo.
Ukulungelelaniswa kwangaphambili, siqhagamshelana neendwendwe ukuba zihambe nabo kwi-chalet kwaye zinike iinkcazo eziyimfuneko ukuze ziququzelele ukufakwa kwazo. Ngokufanayo, senza iinkcukacha zoqhagamshelwano zifumaneke, iinkcukacha zokuhambahamba, ukuthenga kunye neengcebiso zokutyelela kwindawo.
Sihlala sijonge kuwo nawuphi na umbuzo okanye imfuno enokuthi ivele ngexesha lokuhlala kwakho.
Kuyacetyiswa ukuba ulungelelanise ukutya kakuhle ngaphambi kokuba ufike kwi-chalet, ukuze babe nakho konke abakufunayo. Ngaphandle koko, unokuthenga eCarhuaz kuba akukho venkile kufutshane ne-chalet.
Ukulungelelaniswa kwangaphambili, siqhagamshelana neendwendwe ukuba zihambe nabo kwi-chalet kwaye zinike iinkcazo eziyimfuneko ukuze ziququzelele ukufakwa kwazo. Ngokufanayo, senza…